चकित पार्ने रत्न तामाङ ! करेन्टले दुबै हात काटियो तर हातमा लौरो बाधेर ड्रम बजाउछन ! [भिडियो]
पछिल्लो समय करेन्ट लागेर अङ्गभङ्ग भएका, ज्यान गुमाएका ब्यक्तिहरुको समाचार प्रसस्त हेर्न, देख्न पाउछौ । यसरी अङ्गभङ्ग भएका कतिपय ब्यक्तिहरु आफ्नो जिन्दगी नै बोझ सम्झन्छन जसको कारणले उनिहरुले आफैलाई चिन्न र चिनाउन सक्दैनन ।
तर रत्न तामाङ एक यस्ता पिडित ब्यक्ती हुन, जसको करेन्टले दुबै हात काटियो तर दुबै हातमा लौरो राखेर ड्रम बजाउछन। उनको यो साहस हिम्मत सबै हरेश खाने जिबनको लागि प्रेरणा बनोस ।
जिन्दगी सहज कस्को देखिन्छर । सबैलाई आ आफ्नै पीडा ठूलो र आफुले मात्र यस्तो पीडा भोगेको महशुस गर्दछन तर सम्झनुस त यी दुबै हात नभएका रत्न तामाङको साहस ! उनलाई शिशिर भण्डारीले मिडियामा ल्याएका छन । शिशिर पछिल्लो समय सबै दिनदुखीको सहारा बनेका छन ।
डस्बिनमा फालेको बच्चा आफुले ग्रहण गर्नु देखि लिएर नया प्रतिभा खोज्ने, पीडित ब्यक्तिको लागि सहयोग जुटाउने गर्दछन । उनी एक कुशल कलाकार पनि हुन । अहिले उनको प्रशम्शक प्रशस्त छन । उनले नयाँ नया न्युज नेपाल नामको युट्युव च्यानल चलाउछन । उनको यस च्यानलमा करोड बढी सब्स्क्राईबर पुगेका छन ।
हेर्नुहोस आजको यो दुखद तर प्रेरणादायी भिडियो !